Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Viorica": nkọwa, foto, nhọrọ, njirimara, mmepụta ihe - Mkpụrụ vaịn - 2020
Mkpụrụ vaịn dị iche iche nke Moldavian "Viorica"
N'etiti mkpụrụ vaịn vine dị iche iche "Viorica" ​​bụ ama maka ọmarịcha ụtọ ya na iguzogide ntu oyi.
N'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ọdịdị na àgwà nke mkpụrụ vaịn "Viorica", akụkọ ihe mere eme nke nhọrọ ya, nakwa otu esi eto ya n'ụlọ.
Bush na Ome
Ụyọkọ na tomato
N'iji mkpụrụ vaịn "Viorica"
Iji jikọta uru nke dị iche iche mkpụrụ vaịn iche, breeders jiri hybridization - agafe dị iche iche iche.
"Viorica" Ọkpụkpụ na-emepụta ihe ndị dị na Moldovan, nke e nwetara na 1969 site n'ịfe ụdị "Zeybel 13-666" na "Aleatiko."
Ị ma? Iji mee otu karama mmanya, ị chọrọ mkpụrụ vaịn nke isii.
"Viorica" ​​na-adabara n'ọnọdụ ihu igwe nke Moldova, nke mere ka o nwee ike iwe ihe ubi buru ibu ọbụna n'oge ụkọ mmiri n'afọ 2012. A na-agbasawanyekwa na Azerbaijan, Russia na n'ebe ndịda nke Ukraine.
"Viorica" ​​- ngwakọ mgbagwoju anya. Ka anyi biri na ntughari ya.
Mụta banyere Chardonnay, Pinot Noir, Isabella, Cabernet Sauvignon, Krasnostop Zolotovsky, Alpha, Riesling mkpụrụ vaịn.
Osisi a dịgasị iche iche dị ogologo, na-eto eto na ike bisexual. Ogologo nke Ome dị mma; 80-90% nke mkpokọta Ome na-amị mkpụrụ. Na-eto eto sprout, 1-2 ụyọkọ na-emekarị chara n'onwe, na na-eto eto sprout, 3-4.
Akwụkwọ ndị ahụ bụ ọkara, gbasaa ngwa ngwa, efere akwukwo nke nwere akụkụ ọnụ. Akụrụngwa dị n'akụkụ ọnụ nke akwukwo agụba.
Mụta otú e si agba ihe site na mkpuru osisi, esi akụ, esi akụ ihe, esi egwu mkpụrụ vaịn n'oge opupu ihe ubi, n'oge okpomọkụ, ụbịa, esi ekpuchi maka oyi.
Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Viorica" ​​bụ ihe ọkara, ọdịdị ahụ bụ cylindrical, njupụta dị oke. Ibu arọ nke ụyọkọ dị iche iche site na 250 ruo 300 g. Ụkwụ nke ụyọkọ dị ogologo ma gbaa gburugburu.
Na tomato bụ nke ọkara nha, ọdịdị gbara ọkpụkpụ ya na akpụkpọ anụ siri ike nke agba odo-amba. Ibu arọ nke otu bred averages 2 g. N'ime beri, e nwere 2-3 mkpụrụ. Anụ ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ, na-esi ísì ụtọ nke nutmeg.
"Viorica" ​​- otu mkpụrụ vaịn na-acha mkpụrụ vaịn nke na-ajụ n'oge okpomọkụ, ọ bụ 145-150 ụbọchị. Na shuga ọdịnaya nke ihe ọṅụṅụ nke tomato - 18-20% na acidity nke 7-9 g / l. Mkpụrụ ahụ bụ 90-100 centent kwa hectare.
Nke a dịgasị iche iche na-eguzogide ntu oyi ruo -25 Celsius. A na-emezi ihe ndị Vioriki mebiri site na ntu oyi. Ọrịa ọrịa bụ nkezi. Iji mildew, iguzogide dị elu (2 isi), ka oidium, ire ntụ ntụ, anthracnose na phylloxera - na ọkwa nke isi 3.
Mụtakwuo banyere ọrịa na pests nke mkpụrụ vaịn - mildew, oidium, phylloxera, anthracnose, alternariosis, chlorosis, grape pruritus, tsikadkas, beps, shieldfish.
Ịkụ osisi seedlings agaghị esi ike. Mbụ ịkwesịrị ịkwadebe olulu mmiri ahụ.
N'ihi na nnukwu ugbo na-atụ aro ụdị vysokoshtambovaya nke ụdị ohia a na-ejikọta ya na ndokwa. Ọdịda atụmatụ 2.75-3.00 x 1.25 m.
Ugbo umuaka jiri uzo osisi sredneshtambovye, mmezi nke uto bu vetikal, a na-agbazi akuku akuku - 2-2.5 x 1-1.25 m.
Mgbe nkwadebe nke olulu, ọ dị mkpa ijupụta ala ya na akwa nke ụrọ gbasaa site na 10 cm elu. Mgbe ahụ, ngwakọta nke ash, ájá, humus na akụkụ elu nke ụwa ga-ada ụra ruo 10 cm.
Ọ dị mkpa! Na ngwakọta maka ịkụ osisi na akuku olulu ka a machibidoro ịgbakwunye nri.
Mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịkụda seedling n'ime oghere, fesaa na ụwa na mmiri.
Mkpụrụ vaịn "Viorica" ​​nlekọta na-adịghị mma. N'ime oge, a ghaghị emeso ya ugboro abụọ na ọgwụ ndị na-egbochi ọrịa.
A na-atụ aro ịkwanye osisi n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọ dịghị ihe karịrị 50-55 anya na ohia. Mkpụrụ osisi vine kwachaa dị mkpirikpi - 3-6 anya.
E kwesịrị ime ntanarị na mmalite nke oge na-eto eto, a ga-agwụ ya izu isii tupu owuwe ihe ubi.
Ọ dị mkpa ịnakọta naanị mkpụrụ vaịn zuru oke. A ga-ebute ya n'ụzọ dị mma, a ga-egosipụtakwa ya na ihe oriri na-edozi ahụ na nke a. Ịmalite "Viorica" ​​na-emekarị n'etiti September.
Ọ dị mkpa! Unripe mkpụrụ vaịn enweghị ike chara n'onwe na maturation.
Na-anakọta mkpụrụ vaịn ị chọrọ na oyi na-acha ihu igwe. Ejila igirigi ma ọ bụ raindrops tụọ tomato. Mgbe mmiri ozuzo, ị ghaghị ichere na owuwe ihe ubi maka ụbọchị 2-3 ikpochapụ mmiri mmiri si na tomato.
A na-ewepụ bunches nke ọma ka ọ ghara imerụ ha ahụ. A na-eji osisi ma ọ bụ ubi na-egbutu ya, na-ejide ala nke nkwụ. Mgbe ahụ, ọ dị mkpa iji wepu mkpụrụ osisi a mịrị amị ma gbanwee tomato, wee tinye ha n'ime igbe akọrọ n'okpuru ọchịchọ na otu oyi akwa. Iji chebe mkpụrụ vaịn ọhụrụ ruo ogologo oge, ịkwesịrị ịkwadebe ụlọ pụrụ iche. O kwesiri ibu akpo na ochichiri, nke oma, mana ka ekwuputa ya. Igwe ikuku kwesịrị ịdị site na 0 ruo 8 Celsius. A ghaghị ịnọgide na-ekpo mmiri na 60-70%.
Ọ dị mkpa! Ịchekwa mkpụrụ vaịn na ìhè na-eduga ná mbibi nke shuga na mmiri acid na tomato, n'ihi nke a na-efunahụ ya.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi chekwaa Viorica. Iji kpebie onye ị ga - eji mee ihe, ị ga - ekpebi oge ole ị ga - eji mee ka bunches ahụ dị ọhụrụ:
otu ọnwa abụọ. A na-eji igbe na-eji nchekwa eme ihe. Ebube ekwesịghị ijikọta ọnụ;
nchekwa ihe karịrị ọnwa abụọ. A na-eji igbe rụọ ihe karịrị 20 cm n'ịdị elu. 3-4 cm ọcha hardwood sawdust kwesịrị enịm ke ike. A ghaghị ịwụnye ihe ndị dị na igbe na sawdust. A na-etinye ụyọkọ na-atụ ihe karịrị 1 n'arọ n'ahịrị, ruo 500 g - na abụọ ahịrị. Ọzọ, a na-ekpuchi mkpụrụ vaịn ahụ na sawdust na 7 centimeters n'elu ma tinye na nchekwa.
A na-eji tomato mee ihe ọhụrụ iji mee ka ihe ọṅụṅụ na-eme ka a na-anụ ọkụkụ. Site na "Vioriki" na-eme ka mmanya na-akọrọ na ihe ọṅụṅụ na-edozi.
Mkpụrụ mmanya na-edozi ahụ bụ ihe doro anya, ha nwere ifuru ísì ọma na ọdịdị nke muscat-thyme. Mmanya na-acha vaịn dị iche iche na-achọ ka a ree ya mgbe ọ dị obere.
Ị ma? Na Portugal na Spain, na New Year Eve, ọdịnala na-eri mkpụrụ vaịn 12 n'oge ikpeazụ nke afọ, na-eme ka mmadụ iri abụọ na abụọ.
Onwe gị, ị nwekwara ike ịṅụ mmanya si "Viorica". A kwadoro ya site na ịṅụcha mkpụrụ vaịn ga-(gwakọta mkpụrụ vaịn) site na ịgbakwunye syrup sugar ma ọ bụ beckmes (mkpụrụ vaịn gwakọtara). Iji nye ya ihe ọṅụṅụ mmanya na saturation, ọ dị mkpa iji na-akwado mkpụrụ osisi pulp ahụ (ngwakọta nke mkpụrụ vaịn a gwakọtara) n'ime ihe na-acha odo odo. A na-eme jupụta n'ime awa iri abụọ na anọ na okpomọkụ. Mgbe ahụ, a na-ahụ pulp ahụ, a na-agbanwekwa wort.
Ọzọ, a na-etinye wort na tank mmiri, na-ejuputa na 3/4 olu, gbakwunye omenala dị ọcha nke gbaa ụka na ferment. Mgbe a gbaa ụka, a na-agbakwunye bacme ma ọ bụ shuga sirop. N'ụbọchị nke anọ, 50 g shuga kwa 1 liter nke ọgwụ na-eme achịcha, n'ụbọchị nke asaa - 100 g, na ụbọchị nke iri -120 g mmanya mmanya fermented kwesịrị inwe agba aja.
Mụta otu esi eme mmanya si na mkpụrụ vaịn, Isabella, site na umu osisi, site na osisi rose, site na raspberries, si gooseberries, site na chokeberry, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, jam.
A na-atụ aro maka "Viorica" ​​maka ịmalite ma na-eri nri ndị na-ahụ mkpụrụ vaịn. N'ịmara ụdị aghụghọ niile nke nlekọta na nchekwa nke dịgasị iche iche dị iche iche, ị nwere ike ịnụ ụtọ uto ya na àgwà ọma ya ruo ogologo oge, yana ịme mmanya na-atọ ụtọ.
Grade Viorica: Nyocha
N'afọ 2008, enwetara m sapling sitere na Radchevsky, kụrụ osisi gazebo, n'afọ na-esote e nwere ụyọkọ mgbaàmà mana site na anya nchikota, n'ihi mmiri na-efu. n'okpuru mmiri, mana owuwe ihe ubi ka ka ebe ahụ, mmiri nke mmiri na-egbukwa na ọkara okpomọkụ ... Anyị ga-anọgide na-ekwu ihe a n'afọ a.
Anyị nwere ụdị abụọ nke Viorica na-eto eto na mpempe Bianchi ruo mgbe oyi nke afọ 2006. Mmiri a rụpụtara n'ụlọ ya na-adịghị mma - ọ tọrọ ezigbo ụtọ. Muscat flavor ìhè na unobtrusive. Ugbu a, nnukwu akụkụ nke Vioriki nọ na-arụ ọrụ ugbo "Mmeri", st. Vyshestebliyevskaya. Ha na-emekwa ka mmanya si na ya na osisi nke Southern Wine Company - Ochakovo. Mmiri ụlọ ọrụ na-adịkwa ukwuu.
Ugbu a, Viorica bụ otu n'ime ụdị osisi vaịn kachasị ewu ewu na Moldova. Nke a bụ maka seedlings na nnweta mkpụrụ vaịn.
Korksyu 2 hectare Kodryanki. Kama nke ahụ, ọ bụ hectare 2 nke Viorica.